"Jehovah dia namaly an’i Joba ka nanao hoe: … Mahatondra ny Bera mbamin’ny zanany va ianao? Fantatrao va ny lalànan’ny lanitra?"Joba 38:1,32,33
"Ary Joba dia namaly an’i Jehovah ka nanao hoe: Fandrenesan’ny sofina ihany no nandrenesako Anao; fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita Anao; koa dia miaiky sy mibebaka eto amin’ny vovoka sy ny lavenona aho."Joba 42:1,5-6
Niova fo hanaraka an’i Jesosy avokoa ireto mpianakavy, afa-tsyi Menja zanaka lahimatoa, izay nanohitra. Mahery setra mihitsy aza izy. Mivavaka mandrakariva ho azy ny ankohonany, saingy nifandimby ny taona, nefa tsy nisy fiovana…
Nanjary mpahay zava-maneno fanta-daza i Menja, ka nantsoina matetika. Indray alina efa tara be, iny izy nody iny, dia nitraka izy raha nandalo nanamorona ny ala, ary babon’ny hakanton’ny lanitra feno kintana. Efa hatrizay izy no nankafy ny zavaboary… Ny fiezinezin’ny zavatra hitany teo no nahatsapany avy hatrany fa kely sy tsinontsinona izy. Nieritreritra ny fampijaliany ny reniny izy, ka nitomany. Nivavaka izy hoe: «Tompo ô, Andriamanitra lehibe Ianao, ary izaho kosa tsinontsinona. Tokony hiova ny toetrako, ry Tompo!». Ary tao anaty alina mangina dia nitsoka trompetra izy, nanao ilay fihirana tian’ny reniny, sady nihira.
Tampoka teo dia nahare feo malefaka izy. Tsy lavitra azy, dia nisy lehilahy niefonefona nitomany, nitazona tady mody. Hoy izy nanazava: «Saika hamono tena aho, no nohirainao ilay hira fihiran’ny reniko tamiko, fony aho mbola zaza. Lehilahy tsy manan-kantenaina intsony aho». Dia nasain’i Menja niaraka taminy izy, ho any an-tranon-dray aman-dreniny. Tamin’ny telo maraina tamin’izay, kanefa mbola nirehitra ny jiro tao an’efitranon’ny ray aman-dreniny. Nandondòna tao i Menja, ary niditra izy roalahy; mbola teo am-pivavahana ho an’ny zanany izy mivady, tamin’izay. Samy nandohalika izy efa-mianaka, ary nitodika tamin’ny Mpamonjy i Menja sy ilay namany…
Ry ray aman-dreny kristiana, aza kivy. “Ny fiàsan’ny vavaky ny marina dia mahery indrindra” (Jakoba 5:16).